फेशन – Lokpati.com
भारत केपी शर्मा ओली चितवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड पक्राउ नेकपा प्रचण्ड मृत्यु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकार राशिफल नेपाली काँग्रेस नेपाल प्रहरी अमेरिका
आफ्ना आलोचकलाई साम्राज्ञीले ‘कुकुर’को संज्ञा दिएपछि…
लाेकपाटी न्यूज ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:५६ 0
काठमाडौं, ६ साउन। यतिवेला नायिका साम्राज्ञी शाह प्रेमीसँगको फोटोका आलोचना खेपिरहेकी छन्। उनले केही दिन अघि प्रेमीसँग मस्ती गर्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिन्। जसको कारण उनले अहिले आलोचना खेप्नु परेको छ। फोटोलाई लिएर व्यापक आलोचना…
शाहरुख खानको सपनाको घर, गौरीको डिजाइन् (फोटोसहित)
लाेकपाटी न्यूज ६ श्रावण २०७६, सोमबार १३:२७ 0
मानिसपिच्छेका चाहना र महत्त्वाकांक्षा फरक हुन्छन्। कसैका पूरा हुने खालका चाहना हुन्छन् भने कसैका कहिल्यै पूरा नहुने चाहना हुन्छन्। जोसँग जे छैन ऊ त्यसकै प्राप्तिमा भड्किरहेको हुन्छ । जिन्दगीमा को कतिबेला केमा चुक्छ, कसैले भन्न सक्दैन ।…
सेलिब्रेटीको ‘फेसएप’, हेर्नुहोस् को कस्ता देखिए
लाेकपाटी न्यूज ५ श्रावण २०७६, आईतवार १८:०६ 0
काठमाडौं । नेपाली कालाकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई बूढो देखाइएका तस्वीरहरु शेयर गरेका छन्। केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा ‘फेसएप’को प्रयोग बढ्दो छ। बढ्दो ‘फेसएप’को प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबूक तथा इन्स्टाग्राममा एपका माध्यमबाट आफूलाई…
साउनको फेसन हरियो चुरा र मेहेन्दी, यसरी गर्नुहोस् रंगको संयोजन
लाेकपाटी न्यूज १ श्रावण २०७६, बुधबार १५:४१ 0
साउन महिना शुरु भएपछि महिलाहरुमा मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने प्रचलन छ । साउनले फेसन र शृंगारलाई फरक रंगमा पोत्ने गर्छ । साउनमा युवतीको हातमा मेहेन्दी देखिएन भने धेरैले सोध्छन् रे, ‘किन मेहेन्दी नलगाएकी ?’ अर्थात् साउनमा मेहेन्दी लगाउनै…
के–के छन् अनुहारको सुन्दरता बढाउने तरीका ?
लाेकपाटी न्यूज २७ असार २०७६, शुक्रबार ०९:२१ 0
सबैजसो युवतीहरू सुन्दर र हँसिलो अनुहार चाहने गर्दछन्, जसले जो कसैलाई पनि आकर्षित गर्छ। त्यसैले अपनाउने गर्नुहोस्, यी उपाय जसले तपाइको सौन्दर्यतालाई कायम नै राख्न मदत गर्दछ। अनुहारको सौन्दर्यता कायम राख्ने उपायः यदि तपाईं आफ्नो…
लाेकपाटी न्यूज १७ असार २०७६, मंगलवार ०८:२२ 0
काठमाडौं। तस्बिरबाट महिलाहरूको वस्त्र हटाएर नक्कली तस्बिर बनाउन मिल्ने दाबी गरिएको एउटा एपलाई त्यसका निर्माताहरूले बन्द गरेका छन्। पचास अमेरिकी डलर मूल्य राखिएको डीपन्यूड एपमाथि मदरबोर्ड नामको वेबसाइटमा लेख छापिएपछि यसको आलोचना भएको थियो।…
वर्षातमा सवारी चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने ७ कुरा (टिप्स्)
लाेकपाटी न्यूज २३ चैत्र २०७५, शनिबार १४:४७ 0
काठमाडौं। वर्षातको समयमा सवारी साधन चलाउनु निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। वर्षातको समयमा कसरी चलाउने सवारी साधन ? त्यसबारे चालकले केही कुरा जान्नैपर्ने हुन्छ। नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनामध्ये अधिकांश दुर्घटना चालकको लापरवाहीले भएको देखिन्छ।…
प्रियङ्का चोपडाको पहिरनले विश्वभरि तहल्का
लाेकपाटी न्यूज १९ मंसिर २०७५, बुधबार १९:४६ 0
सेतो र ७५ फुट लामो यो के हो ? यो हो प्रियंका चोपडाले आफ्नो विवाहमा लगाएको पहिरन। बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले बुधवार एउटा इन्स्टाग्राम पोस्ट गर्दै विवाहको यो पहिरन सार्वजनिक गरिन्। प्रियंका र अमेरिकी कलाकार निक जोनासले गत साता भारतको…
लाेकपाटी न्यूज २९ असार २०७५, शुक्रबार ११:४८ 0
हुनेवाला जीवनसाथीलाई लिएर सबैको मनमा आ-आफ्नै इच्छा हुन्छ । कोही आफ्नो भविष्यको जीवनसाथी सपनाको राजकुमारलाई बनाउन चाहन्छन् , त कोही आफूले सबैभन्दा धेरै मन पराएको व्यक्तिलाई नै आफ्नो जीवनसाथीको रुपमा हेर्न चाहन्छन् । जसबाट उनीहरुले माया,…
रोजिना श्रेष्ठको अनुभव, ‘कुन सेलिब्रेटी कति, फेसन कन्सस ?’
लाेकपाटी न्यूज २९ असार २०७५, शुक्रबार ११:४४ 0
रोजिना श्रेष्ठ, यो नामलाई चिन्ने अर्को उपमा हो, कायरा बुटिक । शहरका चल्तापूर्जा ब्रान्ड हो, कायरा बुटिक । तर, ७ बर्षअघि फेसनको दुनियाँमा प्रवेश गरिरहँदा रोजिनालाई लागेको थिएन, फेसनको संसार यति आयमिक छ । जसै उनी फेसनवृत्तमा छाइन्, यसका…